Daan daansi Siyaasadeed | allsanaag
Daan daansi Siyaasadeed
Daan daansiga la daan daansaday Madaxweyne Deni ma uga baaqan doonaa safarkii Muqdisho?
Shirkii Wada tashiga Puntland oo ay ka soo qayb galeen isimo, waxgarad, siyaasiyiin, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xildhibaano, xubno ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Puntland, wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa waxaa laga soo saaray qodobo wax tar u leh umadda Soomaaliyeed iyo geedi socodka Dawlad dhisida Soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta.
Shirkan markii uu dhamaaday ayaa madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni , isaga oo fulinaya codsigii Isimada Puntland iyo shacabka Puntland wuxuu ku dhawaaqay inuu tegayo Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo halkaa kula soo hadlayo madaxda Qaranka Soomaaliyeed.
Markii uu madaxweyne Puntland ku dhawaaqay arintan farxadda gelisay in badan oo ka mid ah Bulshada Soomaliyeeda ayaa Kooxda CBB, waxa ay Baraha bulshada soo dhigeen in go’aamadii shirka ee la akhriyey iyo wixii shirka loogu wada hadlay ayna is lahayn. Ma jiro Isim, Siyaasi, iyo madaxweynayaashii hore ee Puntland oo sheegay inay waxy ka shireen iyo go’aamadu ayna is lahayn.
Maalintii ku xigtay Xildhabaandii Digil iyo Mirifle, oo uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Ibbi oo waagii Allah ha u naxariistee Cabdulaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya isaga oo beelaha Hawiye kicinaya ku khudbadayn jiray in madaxda Soomaalidu xaasaskooda u geeyaan Itoobiyaanka, ayaa iyaga oo la soo biyeestay iyaguna waxay sheegeen in shirka loogu gefay Beelaha RAXANWEYN. Shirkii beelaha Harti iyo Isimadoodu isugu yimaadeen oo ay go’aanka ka soo saareen waxay ku sheegeen Xildhibanada Digil iyo Mirifle in Sadex qof oo qura ay soo qoreen War murtiyeedka . Iyaga oo xoojinay kooxda CBB, oo horay u sheegay in sadex qof oo ka soo jeeda beesha Maxamuud saleebaan ay warmurtiyeedka qoreen, iyaga oo si khaldan sawiradooda u isticmaalay
Maanta ayaa mar kale Wasiiraddii federaalka ee shirka ka qayb galay , waxay warbaahinta SNTV oo aan shirka markuu soconayey si toos ah u soo daynayn iyaga oo sheeganaya Talafishan Qaran ayaa waxay ka sii daayeen sidan “Waxaan diidan nahay go’aamada lagu sheegay war-murtiyeedka shirka ka soo baxay, qeybta ku saabsan Dowladda federaalka oo aan marnaba ka turjumeyn hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka” ayuu yiri Wasiir Cawad.
Wasiir Bidhaan isaga oo u gefaya Bulshada Puntland iyo Beesha Warsangeli wuxuu sheegay isaga oo raali gelinaya SNM in Gobolka Sanaag ay gacanta ku hayaan beesha Isaaq
Hadaba waa maxay labada qodob ee la doonayo in laga caraysiiyo madaxweyne Deni si aanu Muqdisho u iman, oo aanu u dhicin kulankii Soomaali midnimadeeda lagu ilaalin lahaa
1- In aan Muqdisho lagu qaban shir looga hadlaayo Midnimadda Umadda Soomaaliyeed. Caawa Gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Hargaysa ayuu joogaa , lamana oga waxay ka wada hadlayaan maamulka Biixi ee doonaya inay Soomaali inteeda kale ka go’aan
2- Shirka uu gogoshiisa umadda Soomaaliyeed u dhigay madaxweyne Deni ayaa la sheegay ” “in aanu Farmaajo yeelayn in Puntland marti galiso shir noocan ah inta Fahad Yaasiin gacanta ku hayo MW Farmajo.”
Ugu danbayntii haddii ay Villa Wardhiigleey ka dhab tahay in la helo midnimo Soomaaliyeed, isu tanaasul, wada hadal , marna ma ayna maal geliyeen Kooxda CBB, Kooxda Ibbi, maantana ma soo saareen war saxaafadeed wax loogu dhimayo 2000 oo qof oo Soomaaliyeed oo shiray go’aan ay soo saareen. Dawladda Puntland kama aamusi doonto daan daansiga danaystayaasha haya hogaanka Soomaaliyeed ee waxaan la ogayn in madaxweyne Deni haddii lagu balan furay oo la sugi waayey kulankiisa inuu Muqdisho aadi doono
← Mashaariic laga hirgeliyey Gobolka Sanaag SNM ayaa haysta Sanaag →